Post တွေ Fb မှာတင်ပြမှ တော်လှန်တယ်ထင်ရင် သူ့ကို BOYCOTT လုပ်လိုက်ဖို့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလိုက်တဲ့ ရဲရင့်အောင် – Cele Top Stars
Post တွေ Fb မှာတင်ပြမှ တော်လှန်တယ်ထင်ရင် သူ့ကို BOYCOTT လုပ်လိုက်ဖို့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလိုက်တဲ့ ရဲရင့်အောင်
June 26, 2021 By admin2Celebrity
ချစ်လှစွာသောပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်သူများထဲတွင် အဆိုတော် ရဲရင့်အောင်လည်း အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး နေ့စဉ် လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ဘေးကင်းရာသို့ တိမ်းရှောင်နေရတာကြောင့် သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားနေမှုတွေကို အပြည့်အစုံ မဝေမျှနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီအကြောင်းအရင်းတွေကို မသိဘဲ တစ်ချို့တွေက ရဲရင့်အောင်အား ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ မနေ့ညက သူ့ရဲ့ Facebook Story မှာ တော်လှန်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာလှုပ်ရှားမှုမှမတွေ့လို့ အပြစ်တင် ဝေဖန်နေတဲ့ လူတစ်ချို့ ချက်ကျလက်ချ ပြန်ရှင်းပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာ အကုန်ထုတ်ပြောပြီး ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးပြမှ၊ နေ့စဉ် ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို Facebook မှာ post တင်ပေးနိုင်မှ တော်လှန်တယ်လို့ သတ်မှတ်ေ နတယ်ဆိုရင်
သူ့ကိုလည်း boycott စာရင်းထဲသာ ထည့်လိုက်ကြဖို့ စိတ်မကောင်းစွာ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူလုပ်သမျှအရာတွေဟာ ဘယ်သူမှသဘောကျ ကျေနပ်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကိုယ် လုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အခုလို ရေးသားပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ” ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ခဲ့ရတယ် အခုဘာတွေလုပ်နေတယ် ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုနေနေရတယ် ဆိုတာတွေကို အကုန်ထုတ်ပြောပြပြီး ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးပြမှ ၊ နေ့စဉ်ဖြစ်သမျှ သတင်းတွေကို အများနဲ့တန်းတူ နားစွင့်နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးထဲ ၊ သူများလာပြောပြမှ သိရတဲ့ အခြေအနေမျိုးထဲ နေ့တိုင်း Facebook မှာ post တွေ တင်ပေးနိုင်မှ တော်လှန်နေတယ်လို့ သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ငါ့လည်း boycott စာရင်းထဲသာ ထည့်လိုက် ပါတော့ကွာ ဆုံးရှုံးစရာလည်း ကုန်သွားပါပြီ..။
ငါဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ ငါပဲသိတယ်။ February (၁) ရက်နေ့မနက် (၆) နာရီကစပြီး ငါလုပ်သမျှအရာတွေက မင်းတို့သဘောကျဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူး။ ငါ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ငါပါ အားတဲ့အချိန် စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ သုံးတဲ့ Instagram ပို့စ်တွေအောက်မှာ အာလာချောင်တာတွေ ရပ်ပါတော့ ငါတို့လုပ်စရာ ရှိတာတွေကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ သိုသိုသိပ်သိပ်လုပ်နေလို့ မရဘူးလား ? ” ဟုဆိုပြီး ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးကာလမှာ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ တစ်ချို့အရာတွေကို လူမသိအောင် လုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အပြစ်ပြောမနေကြဘဲ ကိုယ်ပါဝင်နိုင်တဲ့ နေရာကနေသာ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ပေးကြဖို့ ပြောကြားရင်း ဒီသတင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာ
ယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိ်ုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ခဈြလှစှာသောပရိတျသတျကွီးရေ ပွညျသူတှနေဲ့ အတူ အမှနျတရားဘကျက ရပျတညျသူမြားထဲတှငျ အဆိုတျော ရဲရငျ့အောငျလညျး အပါအဝငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှောလညျး တကျကွှစှာ ပါဝငျခဲ့ပွီး နစေ့ဉျ လမျးပျေါထှကျပွီး ဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ လတျတလောမှာတော့ အခွအေနေ အရပျရပျကွောငျ့ ဘေးကငျးရာသို့ တိမျးရှောငျနရေတာကွောငျ့ သူ့ရဲ့လှုပျရှားနမှေုတှကေို အပွညျ့အစုံ မဝမြှေနိုငျတာ ဖွဈပါတယျ..။
သူ့ကိုလညျး boycott စာရငျးထဲသာ ထညျ့လိုကျကွဖို့ စိတျမကောငျးစှာ ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ သူလုပျသမြှအရာတှဟော ဘယျသူမှသဘောကြ ကနြေပျဖို့ မဟုတျဘဲ ကိုယျ့ယုံကွညျခကျြနဲ့ ကိုယျ လုပျနတောဖွဈကွောငျးကိုလညျး အခုလို ရေးသားပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ” ဘာတှလေုပျခဲ့တယျ ဘယျလိုတှေ လုပျခဲ့ရတယျ အခုဘာတှလေုပျနတေယျ ဘယျနရောမှာ ဘယျလိုနနေရေတယျ ဆိုတာတှကေို အကုနျထုတျပွောပွပွီး ကိုယျ့သတှေငျးကိုယျတူးပွမှ ၊ နစေ့ဉျဖွဈသမြှ သတငျးတှကေို အမြားနဲ့တနျးတူ နားစှငျ့နရေတဲ့ အခွအေနမြေိုးထဲ ၊ သူမြားလာပွောပွမှ သိရတဲ့ အခွအေနမြေိုးထဲ နတေို့ငျး Facebook မှာ post တှေ တငျပေးနိုငျမှ တျောလှနျနတေယျလို့ သတျမှတျတယျဆိုရငျတော့ ငါ့လညျး boycott စာရငျးထဲသာ ထညျ့လိုကျ ပါတော့ကှာ ဆုံးရှုံးစရာလညျး ကုနျသှားပါပွီ..။
ငါဘာတှလေုပျနလေဲဆိုတာ ငါပဲသိတယျ။ February (၁) ရကျနမေ့နကျ (၆) နာရီကစပွီး ငါလုပျသမြှအရာတှကေ မငျးတို့သဘောကဖြို့အတှကျ မဟုတျဘူး။ ငါ့ယုံကွညျခကျြနဲ့ငါပါ အားတဲ့အခြိနျ စိတျထှကျပေါကျအနနေဲ့ သုံးတဲ့ Instagram ပို့ဈတှအေောကျမှာ အာလာခြောငျတာတှေ ရပျပါတော့ ငါတို့လုပျစရာ ရှိတာတှကေို တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ သိုသိုသိပျသိပျလုပျနလေို့ မရဘူးလား ? ” ဟုဆိုပွီး ရေးသားထားတာဖွဈပါတယျ။ တျောလှနျရေးကာလမှာ ကိုယျလုပျနတေဲ့ တဈခြို့အရာတှကေို လူမသိအောငျ လုပျဆောငျရတာမြိုးတှေ ရှိနတေတျပါတယျ။ ဒါတှကေို အပွဈပွောမနကွေဘဲ ကိုယျပါဝငျနိုငျတဲ့ နရောကနသော ပူးပေါငျးဆောငျ ရှကျပေးကွဖို့ ပွောကွားရငျး ဒီသတငျးလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျ။ဖတျရှူ့ပေးကွတဲ့ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာ
ယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပျိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော..။
သူနှစ်သက်တဲ့တက်တူးလေးထိုးထားပြီးမှ မပြဖြစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းဝမ်းနည်းစွာပြောပြနေတဲ့ ရေမွန်ရဲ့မိခင်(ရုပ်သံ)